Kiobà: Ireo Niharam-boina Noho i Irma tao An-tanànan’ireo Tafiodrivotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2017 19:51 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, English, Italiano, Español
Faharavàna naterak'ilay tafiodrivotra tamin'ny toeram-ponenana (Sary: Rogelio Serrano)
Ampahany navoakan'ny Global Voices irery ihany ity lahatsoratra ity. Azo jerena eo amin'ny blaogy Periodismo de Barrio ny dika niandohana voalohany, izay ahafahana ihany koa mamaky ireo lahatsoratra hafa an'i Rogelio Serrano Pérez.
Saika nipotsaka mihitsy ireo mason'i Yainelis, saingy tsy nanangoly azy akory ny tahotra. Ny finday entin-tanana eny aminy, nivoaka izy hanara-maso ny tafiodrivotra.
Taona vitsivitsy vao tsy ela akory, teny akaikinà rambon-danitra roa no nahitàna azy, ary ny taona 2008, natsipin'ny rivo-mahery “Ike” teny amin'ny rindrin'ny efitrano fisakafoanana izy sy ny fianakaviany, raha iny mbola nifanjevo hamonjy ny varavaran'ny tranony iny izy ireo. Na izany aza anefa, ny rivodoza tamin'ny 29 aogositra 2017, araka ny filazany, no tena nahatalanjona indrindra.
“Tsy fantatra izay toerana niaviany, tsy avy akory ny orana! Nanapa-kevitra ny handeha hikaroka ny findaiko aho no indro andiana voromailala no hitako te-hipetraka hidina, saingy tsy navelan'ny rivotra”, hoy ny fitantaran'i Yainelis. “Rehefa niverina teny amin'ny arabe aho, nanidina sahala amin'ny taratasy ireo tafo fanitso”
Avy ao amina trano biriky vitsivitsy eo amin'ny kianja tena be mpivezivezy ao San Juan de Dios, tafon'ny trano iray manontolo no hitan'i Georgina Vergel Aguilar entin'ny rivotra. “Soa ihany fa tsy nisy nipetraka tao aminy! Niasa hatramin'ny maraina ireo mpiasan'ny orinasa mpamokatra jiro mba hanala azy io teny amin'ny tariby mpitondra herinaratra.”
Tao amin'ny afovoan-tanàna manan-tantara, izay nanampohan'ny tafiodrivotra ny olona rehetra, tsy nampoizin'ny olona ny rivodoza Irma. Fantatra ao amin'ilay Nosy ny atao hoe rivodoza ; tsy dia fantatra loatra kosa ny tafiodrivotra.
Ny tanànan'i Camaguey no tanàna lehibe indrindra tena potik'ireo tafiotra tamin'ny tantaran'i Kiobà, tafiodrivotra enina no namely ny sisintaniny tao anatin'ny roa ambiny folo taona farany”, araka izay azo vakiana ao anaty Atlas-n'i Camaguey, nosoratan'i Roger Rivero Vega, mpikaroka ao amin'ny Foibe mpamantatra ny toetrandron'i Camaguey, tamin'ny taona 1989.”
“Ao Kiobà, tsy mampilaza ireo tafiodrivotra. Resy lahatra ny manampahaizana iray fa feno avokoa ireo fepetra rehetra mety hisian'ny tafiodrivotra amin'ny andro iray voatondro, saingy tsy ampy kosa ireo singa hamaritana mazava izay toerana hisy azy.”
“Rehefa mitranga ny tafiodrivotra, tsy maintsy hadihadiana izay làlany, amin'ny alalan'ny fanadihadiana ireo karazana fahavoazana sy amin'ny alalan'ny fanangonana ireo vaovao avy amin'ireo rehetra nahita ny fiàsany. Eto, tsy afaka natao izany, sady manjary miha-sarotra harany hatrany.”
“Nihatsara tokoa ireo fampiasanay radàra fitiliana, saingy ankehitriny, tsy manana drafitra fandalinana mikasika ireo tafiodrivotra ny Ivontoerana. Hatramin'ny taona 1995, manokan-tena saika ho an'ny fiovàn'ny toetrandro monja aho, ary izaho irery no manao ireo fikarohana mikasika ireo tafiodrivotra ao Camaguey”, hoy i Roger Rivero manamafy .
Tsy manao fanentanana amin'ny media eo an-toerana mba hanomanana ireo mponina ao Camaguey amin'ny fahatongavan'ny tafiodrivotra. “Hafa ny amin'ireo rivo-doza, voaomana, saingy miforona ao anaty fotoana indray mipi-maso ny tafiodrivotra”, hoy ny fitantaran'i Idalia Andreu.
Ho azy, noho ny tranony vita tamin'ny rafitra nentin-drazana, tsy loza i Irma, saingy ny herin'ny tafiodrivotra tsy mahazatra dia, vaovao ratsy ho azy. Tao an-dalantsaran'ny tranony, gadran'ny herin'ny rivo-mahery tao izy, ary nony farany dia lasa avokoa ireo lamba famaohany sy ireo fitafiany ary varavarankely telo no vaky. “Raha tsy nitazona tsara tamin'ireo fefy vy aho, dia lasany tany.”
José, mpifanolo-bodirindrina iray, tsy te-hiresaka an'io. “Koa raha tsy hoe nanova zavatra io…..”
Tany amin'izy ireo, tsy nisy olona avy tao amin'ny governemanta tonga mba nanadihady ireo fanimbana vokatry ny tafiodrivotra. Ankehitriny, raha te-hanolo ireo tafo lasan'ny tafiodrivotra i José, mety ho ataony ao anatin'ny kaonty vokatry ny famelezan'i Irma izany.
Trano fonenana roapolo sy ny Théâtre Guiñol izay vao avy navaozina, io no fahasimbana voatazon'ny fanadihadiana nomen'ny Fahatilavitra Camaguey tamin'ireo vaovaom-pirenena taorian'ny fandalovan'ny tafiodrivotra. Tsy tokony natao fohy izany, raha jerena ireo loza izay niainan'ireo mpifanolo-bodirindrina tamin'ny faritra manodidina an'i Nuevo Venezuela, miorina eo akaikin'ny orinasa mpanao legioma am-bifotsy El Mambi, izy io koa adino tao anatin'ilay tatitry ny fahitalavitra.
Vao haingana ny faritra Nuevo Venezuela ary misy an'ireo sisindalana, ireo arabe vita amin'ny rarivato sy ireo trano vita rafitra nentin-drazana. Miala avy eo amin'ny faritr'io toerana an-drenivohitra io ka hatreny amin'ny lalamby afovoantany, maro ireo olona no mipetraka tsy ara-dalàna.
“Tsy ao anaty sarintany ity faritra ity”. Tsy nihodinkodinan'i Pedro Luis Hernández Martínez ny resaka. Vaovao eto izy, ary ao anatin'ny tsy ara-dalàna, sahala amin'ny rehetra ihany. “Raha tsy mividy tafo taila aho tsy omena n'inon'inona. Very manodidina ny 300 pesos aho tamin'ireo taila”.
“Nefa mbola nisy very betsaka lavitra”.
Nanova endrika ny tranon'i Rolando Carmenate Consuegra ilay tafiodrivotra. “Zara aho fa afaka nanangona fotsiny ireo fitaovako, ary dia tonga ny rivo-doza. Ny tena heloka bevava teto dia tsy mba nandalo akory ry zareo mba hamindra anay, miaraka amin'ny habetsahan'ireo ankizy marobe eto amin'ity toerana ity.”
Nampihilana bebe kokoa ny tranony i Irma, ary nampitombo ireo lavaka tao an-tafontrano. Ankehitriny, nikaroka hevitra avy tamin'ireo potika lamba plastika i Rolando sy ny vadiny mba hiarovana ny zanany lahikely vao enim-bolana monja amin'ireo fitatazan-drano.
Ho an'i Ramón Reynier Almanza Díaz, ampy azy ilay fotona nisian'ny tafiodrivotra: nandeha nitady fialofana tany amin'ireo namany izy rehefa avy nampahafantarina azy ireo ny fahatongavan'i Irma.
Ny andron'ny tafiodrivotra, notafian'ny hotakotaka ny tranokeliny vita tamin'ireo hazo sy taila. “Hitako ilay izy nandrava tao amin'ny faritra El Mambi ary tsy nahita n'inon'inona lazaina tamin'ny vadiko aho afa-tsy ny hoe ‘Miafena ianao’. Nohidina tsara ny trano, teo ampototry ny varavaran'ny armoara no nipetraka ary natao tao anatiny ireo zanakay vavy, mitomany. telo taona no zokiny indrindra, ary herintaona sy tapany ny zandriny. Ankehitriny, afaka milalao any ivelany izy ireo, raha vao mandre feona kotroka izy ireo dia mihazakazaka mody.”
Mbola feno tahotra foana i Ramón: “Te-hiala eto amin'ny fomba rehetra ny vadiko, saingy tsy misy ny vola, handeha ho aiza?”
Ho an'ireo izay nahita tamin'ny fahitalavitra, trangan-javatra mampalahelo ilay tafiodrivotra, mahaliana, mandalo, toa lavitra. Araka izany, tsy nisy nandeha nanangona vaovao momba ireo nahita fikorontanan-tsaina tamin'ny zanak'izy ireo, toa an'i Ramón.
Amin'izao fotoana izao, mitovy ihany: tsy mitsahatra ny firesahana any anatin'ireo media mikasika ny vokatry ny tafiotra Irma, ary koa ireo ezaky ny mponina sy ny governemanta mba hanamboarana ireo fahasimbana. Tsy milaza teny iray mikasika ireo izay navela hanavotra ny tenany, sahala amin'i Rolando sy ny zanany. Ho azy ireo, Irma no vanim-potoana mampalahelo indrindra teo amin'ny fiainany, izay nanomboka ny 29 aogositra tao an-tanàn'ireo tafiodrivotra.